Shantan Boos Ayuu Unai Emery Doonayaa In Uu Ka Soo Xoojiyo Kooxdiisa Arsenal Si Uu Kooxaha Waa Wayn Ula Tartami Karo. - Gool24.Net
Shantan Boos Ayuu Unai Emery Doonayaa In Uu Ka Soo Xoojiyo Kooxdiisa Arsenal Si Uu Kooxaha Waa Wayn Ula Tartami Karo.
Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa la filayaa in uu xagaagan isbadal ka samayn doono kooxdiisa kadib xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee Premier league oo uu xaalada adag la soo kulmay.
Wariyaha BBC Sport ee David Ornstein ayaa shaaciyay shanta boos ee uu Unai Emery doonayo in uu xagaagan kooxdiisa ka soo xoojiyo.
Arsenal ayaa hadda ku masquulsan sidii ay ugu guulaysan lahayd finalka UEFA Europa League ee caasimada dalka Azerbiajan ka dhici doona May 12 oo ay Chelsea wada ciyaari doonaan.
Unai Emery oo khibrad layaableh u leh tartanka Europa League ayaa doonaya in ay kooxdiisu koobkan ku guulaysato si ay ugu soo baxaan tartanka xiisaha badan ee Champions league.
Arsenal ayaa si xun ugu soo dhibtoonaysay difaaca liita ee kooxdeeda iyada oo 51 gool looga soo dhaliyay 38 kii kulan ee Premier league taas oo fariin cad u ah Emery iyo maamulka Gunners.
Wariyaha BBC Sport ee David Ornstein ayaa shaaciyay in Arsenal ay haddaba samaysatay ciyaartoy bartilmaameed u ah inkasta oo ayna wali magacaabin agaasimaha ciyaaraha kooxdeeda.
Wariyaha BBC Sport Ee David Ornstein
David Ornstein ayaa BBC Radio 5 Live Sport u sheegay: “Inkasta oo ayna wali magacaabin agaasimaha ciyaaraha, waxay iyagu calaamadsadeen bartilmaameedyo waxaana socda wada hadalada”.
“Waxay raadinayaan in ay shaqaalaysiiyaan khibrad iyo da’yar, waxay muhiimadoodu tahay difaac iyo khad dhexe oo ah xero ganaax-ilaa xerada ganaaxa kale ah”.
“Waxay hore bishii January ugu dhawaadeen heshiiska ay PSG kagala soo wareegayeen Christopher Nkunku, dabcan kani waa in uu badalo Aaron Ramsey” ayuu Ornstein hadalkiisa sii raaciyay.
David Ornstein oo bartilmaameedyada kale ee Arsenal ka hadlaya ayaa yidhi: “Adrien Rabiot waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ay xiliyadii la soo dhaafay isku dayeen in ay la soo saxiixdaan waxayna u hayeen xiiso waqti dheer soo taagnaa, laakiin xaalad adag ayuu ku jiraa wuxuuna qabaa dhibaatiyin garoonka ka baxsan”.
“Waxay si aan aas aasi ahayn u raadinayaan gool dhaliye garabka ah. Waxay January ku dhawaadeen Ivan Perisic waxayna xiiso u hayeen Yannick Carrasco”..
“Waxaa suurtogal ah weerar ka dhexe iyada oo Danny Welbeck uu baxayo. Kadib waxaa amaah u bixi kara Eddie Nketiah haddii ay gool dhaliye weerarka dhexe ah keenaan”. ayuu David Osrnstein hadalkiisa ku sii daray.
Ugu danbayn David Ornstein ayaa xusay in difaac bidix iyo midig ay Arsenal doonayso wuxuuna yidhi: “Waxaa jirta xiiso ay ku keenayaan difaac bidix iyo suurtogal ahaan difaac midig laakiin markale kuwaasi waxay ka danbeeyaan difaaca dhexe iyo khadka dhexe”.